किन लगाइन्छ रुद्राक्ष,तपाईको सफलताका लागि कति 'मुखे' रुद्राक्ष राम्रो ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
किन लगाइन्छ रुद्राक्ष,तपाईको सफलताका लागि कति ‘मुखे’ रुद्राक्ष राम्रो ?
काठमाडौं । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार अशुभ ग्रह, प्रतिकूल ग्रहयोगबाट बच्न शान्ति, दान, कवच धारण, रत्न धारण एवम् रुद्राक्ष धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो भए कुन ग्रहका कस्तो रुद्राक्ष धारण गर्ने त ? यो आलेखमा कुन ग्रहका लागि कस्तो रुद्राक्ष धारण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्यः सूर्यका लागि एकमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
चन्द्रमाः चन्द्रमाका लागि दुईमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
मंगलः मंगल ग्रहका लागि तीनमुखे एघारमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
बुधः बुधका चारमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
बृहस्पतिः बृहस्पति ग्रहका लागि पाँचमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
शुक्रः शुक्र ग्रहका लागि छमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
शनिः शनि ग्रहका लागि सातमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
राहुः राहु ग्रहका लागि आठमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
केतुः केतु ग्रहका लागि नौमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
रुद्राक्ष भगवान् शिवसग सम्बन्धित भएकाले यसलाई धागोमा उनेर वा मालाका रूपमा धारण गर्दा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुनुका साथै धार्मिक एवं शारीरिक लाभ हुने विश्वास छ । रुद्राक्ष धारण गर्ने व्यक्तिले त्यसबाट समुचित लाभ प्राप्त गर्न मद्य, मांस, लसुन, प्याजजस्ता तामसी भोजन गर्न नहुने मान्यता छ ।
पाँच मुखी रुद्राक्ष रुद्रकालग्निको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई धारण गर्दा मनमा शान्ति छाउछ । यसले बृहस्पति ग्रहको प्रतिकूलताबाट उत्पन्न सबै दोष निवारण गर्छ ।
यो रुद्राक्षले तपाईंलाई मदत गर्नेछ
वित्त विभागमा भएका व्यक्तिहरुका लागि
वायु सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि
शिक्षा सँग जोडीएका हरुको लागि
राजनीति सम्बन्धी व्यक्तिहरूका लागि
होटल व्यवसायका लागि
प्रविधीसँग जोडिएको व्यक्तिहरूको लागि
टेक्नोलोजीमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि, ७,८,९,१०,११ अनुहार रुद्राक पहिरन सक्दछ। यस रुद्रक्षा को पकडे पछि, मान्छे केवल आफ्नो क्षेत्र मा सफल हुनेछ, साथैं तपाइको नयाँ प्रयोगहरु पनि सफल हुनेछ।